शिरोधारा - बजार रिपोर्ट - नारी
शिरोधारा भनेको के हो ?
शिरो भनेको शिर अनि धारा भनेको शक्ति खन्याउनु, मनतातो मेडिकेटेड ओयद्वारा शिरमा स्पर्श गराउने कार्यलाई शिरोधारा भनिन्छ ।
यसमा के–के प्रयोग हुन्छ ?
दूध, नरिवलको पानी, मेडिकेटेड ओयल अथवा हर्बल ओयल आदि यसमा प्रयोग हुने पदार्थ हुन् ।
शिरोधारा केका लागि गरिन्छ ?
यो पिनास, श्वासप्रश्वासमा समस्या, मानसिक विचलन, टाउको दुखाइलगायत चिसोबाट हुनसक्ने रोगमा उत्तम साबित हुन्छ ।
मनतातो तेलको स्पर्शले मस्तिष्कमा शीतलता प्रदान गर्छ अनि रक्त सञ्चार बढाउँछ । गसले ब्रेनमा अल्फाबिटा वेभ उत्पादन गर्न सहयोग पुर्‍याउने हुँदा डिप्रेसन, एन्जाइटी, अनिन्द्रा आदि समस्या कम गरी स्मरणशक्ति बढाउने काम गर्छ ।
कस्ता मानिसले शिरोधारा लिनुहुँदैन ?
भर्खरै ब्रेन सर्जरी गरेका, ब्रेन ट्युमर भएका, टाउकोमा घाउ–चोटपटक लागेका, ज्वरो आएका तथा सनबर्न भएकाहरूले नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।